တူမောင်ညို - စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီ	သိန်းမြတ် - သူရဲကောင်းတောင်ကြား	ဖိုးသံ (လူထု) - ကျွန်တော်နဲ့ စန္ဒကိန္နရီ	မောင်ရင်ငတေ - နှစ်ဆယ်ကျော်အလွမ်း - ဘီကေကေအစုန်အဆန် (လေယာဉ်စီး၍ ခရီးနှင်မယ်)	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - အကာအကွယ်မဲ့ရရှာတဲ့ မြတ်ဆရာတွေ	အဆိုတော် တကိုယ်တော် ကော်နီ Connie 30 Dreams စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲ	ကာတွန်းလိုင်လုဏ် - ၂၅ လုံးသာ လိုတယ်	မောင်စိုးချိန် - နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ထူထောင်ခဲ့တယ်	သစ်ကောင်းအိမ် - ငွေလရောင်ရဲ့တိမ်းရှောင်သူ - အပိုင်း (၃)	ငြိမ်းချမ်းအေး - တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ်	မိုးမခ Kindel Store
မောင်ဥက္ကလာ - ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ - ဖေကံကောင်း၊ ချစ်မေမေများ နဲ့ မြေခွေး (ထွေထွေရာရာ ဤကမ္ဘာ)
စာပဒေသာ ကောက်စာများကျမ သူငယ်ချင်း “စု” (ကမ္ဘာ့ထင်ရှားသော နိုင်ငံရေးပညာရှင်များနောက်ကွယ်မှ အမျိုးသမီးတဦး)
ပြည် - ဧရာဝတီက ကြိုနေဆဲ ခင်ဝမ်း မိုးမခကို နောက်ယောင်ခံပါ
Cartoon Box (1,410)
Twitter: moemakaကာတွန်း မောင်ရစ် – Pull my leg – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ http://t.co/up6SZ6FC9A about5minutes ago ReplyRetweetFavoriteကျော်ဟုန်း – အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း http://t.co/b9E4skWyeo about 1 hour ago ReplyRetweetFavoriteငြိမ်းချမ်းအေး – တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ် http://t.co/KEWpQbxhap about 10 hours ago ReplyRetweetFavoriteကာတွန်း လိုင်လုဏ် – အစွမ်းကုန် http://t.co/9R1MAne3z0 about 13 hours ago ReplyRetweetFavoriteမာမာအေး – ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (အမှတ် ၅၇၀) http://t.co/1Npmy952E0 about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ၊ (အတွဲ၁၊ အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၄) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၄၊ ၂၀၁၄...Read more » Recent CommentsKhin Maung Saw on ငြိမ်းချမ်းအေး – တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ်ငြိမ်းချမ်းအေး – တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ် - Myanmar Information Zone on ငြိမ်းချမ်းအေး – တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ်မာမာအေး – ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (အမှတ် ၅၇၀) - Myanmar Information Zone on မာမာအေး – ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (အမှတ် ၅၇၀)မောင်စိုးချိန် – နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ထူထောင်ခဲ့တယ် - Myanmar Information Zone on မောင်စိုးချိန် – နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ထူထောင်ခဲ့တယ်တူမောင်ညို – စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီ - Myanmar Information Zone on တူမောင်ညို – စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ